Fahalalahàna miteny · Janoary, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Janoary, 2013
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Janoary, 2013
Mpanao Gazety Gineana Nanjavona Tampoka Tany Angola
Afrika Mainty 31 Janoary 2013
Aiza i Milocas Pereira? Manako eran'ny tambajotra sosialy izany fanontaniana mikasika fanjavonana mpanao gazety sy mpampianatra amin'ny anjerimanontolon'ny tanànan'i Luanda, renivohitr'i Angola izany, toerana nipetrahany hatramin'ny 2004. Ety anaty aterineto, natomboka ny fanangonan-tsonia havantana ho amin'ny Kaomisiona Ambonin 'ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'Olombelona.
Pelaka – Vitsy An'isa Tsy Hita Maso Ao Bangladesh
Azia Atsimo 31 Janoary 2013
Misy ireo vitsy an'isa tsy hita maso ao Bangladesh. Miaina any ambanin'ny tany izy ireo amin'ny ankapobeny ary mahalana ny fisokafan'izy ireo imasom-bahoaka. Ho an'ireo fiarahamonina pelaka, mahatonga azy ireo ho meloka ao amin'ny fireneny ny fironany ara-pananahana. Ankoatra ny tsy famelana azy ireo hizaka ny zony, miatrika fanavakavahana, ompa, herisetra...
Sazy An-tranomaizina Mandra-pahafaty No Azon'i Pınar Selek Taorian'ny Fotoam-pitsarana azy Naharitra 15 Taona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Janoary 2013
Pınar Selek, sosiology sady mpanoratra monina ao Strasbourg, no efa voampanga fa nidaroka baomba tao amin'ny tsenan-tsakay ao Istanbul, voaheloka higadra mandra-pahafaty ao amin'ny fonjan'i Torkia izy. Rehefa noafahana madiodio in-telo nandritra ny fotoam-pitsarana naharitra 15 taona teo izy, nivoaka tamin'ny 24 Janoary 2013 lasa teo ny didim-pitsarana. Hosamborin'ny polisy...
Mikombom-Bava Amin'ireo Fisamborana Faobe Atao Ny Mpanao Gazety Ny Gazety Ao Iran
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Janoary 2013
Namely indray ny lohalaharana erantany amin'ny mpamonja mpanao gazety. Raha kely indrindra Dia Iraniana 12 mpanao gazety no nosamborin'ny olon'ny fitondràna tamin'ny faran'ny herinandro teo.
Maoritania: Manao Diabe 700km Mitaky Ny Rariny Ireo Mpiasa
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Janoary 2013
Tamin'ny Asabotsy 5 Janoary [ar], nanomboka nanao diabe lavitr'ezaka niainga tao an-tanànan'i Zouerat hihazo ny renivohitra Maoritania, Nouakchott ireo vondrona mpiasa tsy ara-dalàna na “Journalia” (mpiasa vonjimaika na isan-tonontaona). Raha ny fitambarany, diabe mirefy 700km no hovitain'ireo mpiasa mba hanoherana ny tsy rariny mihatra amin'izy ireo sy ny famitahana ataon'ny filoha Mohamed Ould...
Hongroà Mpianatra Manao Hetsi-panoherana, Miatrika Sazy, Mitohy Mitolona
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Janoary 2013
Ny Desambra 2012, nitambatra hanohitra ny fampihenana goavana ny isan'ireo azo raisina amin'ny sekoly ambony ireo mpianatry ny anjerimanontolo sy sekoly ambony Hongroà. Mitohy ny tolon-dry zareo hisian'ny fidirana maimaim-poana
Nitifitra Ranon-tsakay Tamin'ireo Mpampianatra Mpanao Fihetsiketsehana Ao Bangladesh Ny Polisy
Azia Atsimo 24 Janoary 2013
Vao voalohany teo amin'ny tantaran'i Bangladesh, no nampiasa tifitra ranon-tsakay ny polisy mba hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana. Mpampianatra sy mpiasa an-jatony avy amin'ireo sekoly tsy miankina no voatifitr'izany. Nanao fihetsiketsetahana izy ireo ary nitaky mba hahazo fanampiana Fandoavam-bola Isam-bolana (MPO) avy amin'ny governemanta ny sekolin'izy ireo. Nitatitra ilay bilaogera Amrito Shudha fa mpampianatra iray antsoina...
Ny Taokanton'ny Fanoherana Ao Shina, Mihoatra Lavitra An'i Ai Weiwei
Azia Atsinanana 24 Janoary 2013
Lasa malaza ao Shina ny endri-panoherana atao amin'ny endrika taokanto. Ity lahatsoratra ity dia mitondra ny mpamaky hijery ireo hetsika kanton'ny tarika - Made-in-J Town - izay nanao seho maro tamin'ny alàlan'ny vatany tao Shandong tamin'ny 2008, taonan'ny Olaimpika tao Beijing sady taona niatrehana famoretana henjana ho an'ireo feo manohitra.
#DELETECONTROL/: Fanentanana Hanoherana Ny Famoretana Aty Anaty Aterineto
Fanarahamaso 23 Janoary 2013
Ny Sekoly Ambony Misahana Ny Fifandraharahana ao Pays-Bas, Hivos, izay miara-miasa amin'ny Global Voices Advocacy, ny Witness, ny Mideast Youth ary ny Tactical Technology Collective, dia mikarakara hetsika fanentanana antsoina hoe #DELETECONTROL/, hanampiana ireo mpampiasa aterineto tandindonin-doza hiady amin'ny famoretana anaty aterineto.
Nahanton'ny Twitter Ny Kaontin'ny Encyclopedia Kiobàna “EcuRed”
Amerika Latina 17 Janoary 2013
Nahanton'ny Twitter ny kaontin'ny [en] Encyclopedia Kiobana "Cubana EcuRed" araka ny fanambaràna iray nakarina tao amin'ny bilaogy ofisialin'ny tranonkala Ecured.